Maalinta: Sebtember 6, 2019
Izmir ee dalka Turkiga Period Xiriirka Shiinaha
88. Izmir Izmir Days International Fair International Business ka leexinayn ee maalintii labaad ka mid ah "Turkey-Shiinaha Business Forum" ayaa waxaa lagu qabtay. Isaga oo ka hadlaya furitaanka golahan, halkaas oo warqad raalli ka ah lagu kala saxeexday magaalooyinka Izmir iyo Chengdu [More ...]
IETT, furitaanka iskuulada 9 Sebtember Isniinta oo ka bilaabanaya jardiinada jiilaalka. Inta lagu jiro xilliga xagaaga, tirada safarada metrobus waxaa lagu kordhin doonaa basaska si joogto ah loo dayactiro. Agaasinka Guud ee IETT, oo ka mid ah kuwa ku xiran degmada Istanbul Metropolitan District, [More ...]
Isgoyska Mevlana Dib Ayaa Loo Furay Gaadiidka
Kocaeli Metropolitan Municipal, Izmit Mevlana Isgoyska Isgoyska Tarabuunka wuxuu ka gudbi karaa shaqooyinka xiritaanka khadka Kuruçeşme Beach Road, kaas oo isku xira İnkılap Avenue, Highway Street iyo Salim Dervişoğlu Street oo isku xiraya laanta iskuullada kahor. [More ...]
Gaadiidka ayaa yimid Kocaeli
Xarunta Isuduwaha Gaadiidka Seka Park Hotel ayaa lafilayaa inay u tagto Kocaeli kulankaas oo lagu qabtay kulan ku saabsan taraafikada gaadiidka. Waxaa laga filaayay iskaashatada gaadiidleyda oo dalbanayay qiimo korodh sababta oo ah shidaalka oo kordha [More ...]
Akhbaar wanaagsan wariyaasha Samsunspor! Axad Axad Bilaash
Duqa magaalada Samsun Mustafa Demir, kulanka ugu horreeya ee horyaalka ayaa la ciyaari doonaa maalinta Axada ee Samsunspor taageerayaasheeda ayaa u adeegsan kara taraamka ciyaarta bilaashka ah Pendikspor ayaa ku dhawaaqay horyaalnimada xilli ciyaareedka cusub ee galaya lambarka sirta ah ee xilli ciyaareedka Yilport Samsunspor'da [More ...]
Turkey, Germany mari doonaa marka Speed ​​Railway Line cusub ee High buuxiya
Midowga Caalamiga ah ee tareenada (UIC), taas oo firfircoon ee Turkey, sida uu sheegay km 594 xogta of line tareen-xawaaraha sare. Turkey, 9 weli network tareenka ugu xawaaraha sare ee adduunka ugu darajada. Derajo. Khadadka ayaa socda [More ...]
Habeenki u Dambeeyay ee Tallaabada Ropeway ee Kırkpınar
Xaafadda Sapanca Kırkpınar Hasanpaşa iyo xaafadaha Mahmudiye ayaa lagu qaban doonaa gobolka, dadka daggan gobolka waxay bilaabeen talaabada mashruuca xariga. [More ...]
Aagga Dhaqaalaha Silk Road iyo xiriirka Turkiga iyo Shiinaha
Degmada Sinciang waxay wakiil u tahay dhaqankeena wadaniga ah ee horumarka iyo horumarka balaaran. hooyo juqraafiga ee Turkiga ee gobolka this, Turkish-Chinese ma cawisa, iyo iskaashiga labada dhinac ee horumarka dalka Turkiga Asian Qarniga Shiinaha [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaaladu waxay badaleysa buundada loo yaqaan Eser Countryside, oo ah xaafada ugu miyiga fog ee ku teedsan xadka Mardin, 115 kiiloomitir u jirta Sanliurfa, wadada weyn waxaana loogu yeeraa 'Buundada Dhimashada'. [More ...]
Degmooyinka Waaweyn ee Denizli waxay bilaabeen isbadal dhanka gaadiidka dadweynaha dhaqsaha, dhaqaala badan iyo raaxo badan. Gaadiidka dadweynaha oo la furayo iskuulada [More ...]
2 ee Gaadiidka Dadweynaha ee Ordu. Muddo ayaa bilaabatay
2 oo ah Mashruuca dayactirka Gaadiidka Dadweynaha wuxuu ka bilaabay degmada Ordu Magaalo Weyn ee degmada Altınordu. marxalad ayaa la hirgaliyay. Muwaadiniintu waxay hoosta ka xariiqeen raaxada gaadiidka dadweynaha iyagoo uga mahadcelinaya daraasadihii la sameeyay, Ordu daraasaddan awgeed [More ...]
Gawaarida Dadweynaha ee lagu baaro Antalya
Kooxaha xakamaynta Gaadiidka Dawladda Hoose ee Magaaladda Antalya waxay rakaab ku qaadeen degmooyinka galbeedka Antalya, gaadiidka dadweynaha, gawaarida ganacsiga iyo adeegga ee loo sameeyay baaritaanka hanti dhowrka. Baadhitaannada, gaar ahaan qalabka ay tahay in lagu keydiyo badbaadada rakaabka [More ...]